Mibilaogy Ny Hezbollah Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2017 1:47 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Desambra taona 2005 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Marolafy tanteraka ny tontolon'ny bilaogy Iraniana izay ahitana bilaogy mavitrika an'arivony. Ao anatin'ireo bilaogy ireo, afaka mahita bilaogy pro-demokratika sy liberaly ary koa ny pro-Repoblika Islamika isika. Ny ankamaroan'ireo bilaogy pro-Repoblika Islamika dia miantso ny tenany ho bilaogy Hezbollah. Na tiantsika izy ireo na tsia, anisan'ny tontolon'ny bilaogy izy ireo ary mandrafitra ny ampahan'ny mponina. Raha milaza hoe Hezbollah amin'ny tontolo iraniana isika dia tsy mitovy mihitsy amin'ny Hezbollah Libaney izany. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny revolisiona tany Iran, niantso ny tenan'izy ireo hoe Hezbollah tsy nisy fandaminana antoko politika ireo hery mpanohana ny Repoblika Islamika.
Mavitrika, maroloko ary miha-milamindamina kokoa ireo bilaogy Hezbollah. Andeha hojerentsika ny sasantsasany amin'izy ireo mba hahatakarana tsara ny zavatra resahiny:
Komitin'ny bilaogera Miozolomana: Tonian-dahatsoratra amin'ny tranonkala sy bilaogera maromaro mpanohana ny Repoblika Islamika tahaka ny Pasdar sy Esteshhadi no nanangana ity komitin'ny bilaogera Miozolomana ity mba hampiroborobo ny hevitr'izy ireo sy hiady amin'ireo bilaogera laika. Raha hiditra ho mpikambana ao amin'ity komity ity, tsy maintsy Miozolomana Shiita ianao ary mino ny Repoblika Islamika. Ny komitin'ny bilaogera Miozolomana dia bilaogy/tranonkala iraisan'ireo bilaogera Miozolomana ary ahitana fizarana samihafa: Amin'ireo fizarana ireo, azontsika vakiana ny Jihad, ny Fahamarinana, ny Hamas, ny Hezbollah, ny mpitondra fivavahana, ny literatiora sy ny sisa. Ho asiana sehatra fifanakalozan-kevitra ity bilaogy/tranonkala ity afaka herinandro vitsy.
Mampiroborobo ny fanivanana ao amin'ny firenena sy ny teny filamatr'izy ireo i Pasdar sy Hadid haker:
We demolish security of the dirty data to unravel evil’s program
Mandrava ny fiarovana ireo tahiry maloto izahay mba hanakorontana ny fandaharan'asa ratsy
Raha mankao amin'ny pejin'ny bilaogy Hezbollah isika, dia mahita rohy mankany amin'ireo blaogy Hezbollah mihoatra ny 150 izay nozaraina vondrona roa Lehilahy sy Vehivavy. Maro amin'ireo bilaogy ireo no tsy manoratra politika. Ao amin'ny Mano Deltag (Persiana, vehivavy Hezbollah) ohatra, mamaky tononkalo fotsiny ianao. Ao amin'ny ankamaroan'izy ireo, mahita vavaka amin'Andriamanitra na amin'ny Olomasina ianao.
Tahaka ireo bilaogy tsy ara-pinoana (mpomba ny demaokrasia), samihafa ny bilaogy Hezbollah ary tsy manaraka lalana iombonana. Mampahatsiahy antsika ny taona voalohan'ny revolisiona ny ankamaroan'ny sary ampiasaina ao amin'ireo bilaogy ireo.